निशा घिमिरेको के छ पछिल्लो अपडेट ? प्रकाश सुवेदी मार्फत यसरि गरे दश लाख सहयोग गर्दै तयार पारिएको हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित). | भिडियो
June 30, 2021 NepstokLeaveaComment on निशा घिमिरेको के छ पछिल्लो अपडेट ? प्रकाश सुवेदी मार्फत यसरि गरे दश लाख सहयोग गर्दै तयार पारिएको हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित).
आज मेलम्चीको अवस्था हेर्नुस, यस्तो डरलाग्दो दृश्य हेर्नुहोस